I-China Thin Wide Strip yeglasi ephezulu iipleyiti ezishushu Ukwenziwa kunye nefektri Shougang
Kule mihla, abapheki bokungenisa kunye nabapheki bendabuko bokukhanya babesisitovu sombane esikhulu ekhitshini. Abapheki bokungeniswa abanakusebenza ngokuqhubekayo kwimeko yomlilo omncinci, apho umbane we-electromagnetic uyingozi ebantwini uphume ngenxa yobushushu obusezantsi obusetyenziswe ngabapheki bendabuko bokukhanya, iqondo labo lobushushu lenyuka kancinci ukuba liqhotse ngokukhawuleza kwaye lichithe kakhulu amandla. Ukwenza ukungabikho kompheki, imveliso yokupheka entsha yeglasi yeepleyiti eziphambili ezishushu zenziwe ekhaya nakumazwe aphesheya.
Njengenkampani yobuchwephesha ephanda nge-alloy yokufudumeza umbane, siyile imitya ekhethekileyo ebanzi ebanzi yokufudumeza izinto zeglasi iipleyiti ezishushu eziphezulu.
Amanqanaba esinyithi kunye nokwenziwa kweMichiza
Ubushushu obuphezulu benkonzo
tensile Strength(Hayi / mm²)
Ngokusekwe kwiiplastikhi ezintle zeealloys, zinokusebenza ngokubandayo kokusebenza. Ukuxhathisa kokuchasana kwealloys kuncinci, kwaye ixabiso lokumelana nemitha nganye alikho ngaphezulu kweepesenti ezine, ezibangela ukuba iialloys ziluncedo nasekutshiseni. Into yokulandelela yongezwe kwii-alloys ezikhuthaza ifilimu ye-oxide ezinzileyo nomzimba ukuba yenze inkqubo yokufudumeza, ephucula ukumelana ne-alloys 'oxidation kubushushu obuphezulu. Ngoncedo umkhondo element, ukumelana enyakazayo kuphuculwe kakhulu kwiqondo lobushushu eliphezulu. Iimveliso azikhubazekanga emva kobushushu obuphakamileyo ixesha elide.
Egqithileyo Umtya oBanzi weWide wokuCoca iGesi
Okulandelayo: HRE ukumelana ukufudumeza ucingo
Ucingo lokuFudumeza ngombane, Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Umbane oFudumeza umbane ngombane, Ubushushu Resistant Electrical Wire, Ukuxhathisa ngombane, Umbane wesiFudumezi,